Miley Koreshi Mwana Wechiitiko Nyaya Plus Untold Biography Facts
Chishanu, May 7, 2021
Russell Westbrook Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Lil Tjay Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Lil Uzi Vert Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
musha nyika dzakabatana Singers Miley Koreshi Mwana Wechiitiko Nyaya Plus Untold Biography Facts
CB inotaura Nhoroondo Yese yeMuAmerican muimbi anonyanya kuzivikanwa nezita rezita rezita "Smiley Miley". Yedu Miley Cyrus Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nyaya yehupenyu pamberi pemukurumbira, nhoroondo yemhuri uye hupenyu hwega. Kunyanya zvakadaro, zvimwe OFF uye ON-Screen zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Hongu, munhu wose anoziva yebasa rake mu hit show "Hannah Montana". Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Miley Cyrus 'biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Miley Cyrus Childhood Nhau - Hupenyu hwepakutanga uye Mhuri kumashure.
Miley Ray Cyrus (christened Destiny Hope Koreshi) akaberekwa musi we 23rd weNovember 1992 kuNashville muTennessee. Akaberekwa naamai vake Letitia Jean Tish (mutambikadzi) uye kuna baba vake, Billy Ray Cyrus, (muimbi wenyika).
Kanye West Childhood Story Plus Untold Biography Facts
Nezvemhuri yake, Miley nderudzi rweAmerica rwemudzimai wakachena neScottish, Irish, Welsh, French, Dutch and German roots.
Mudiki Miley akakurira papurazi remhuri yake muTennessee padivi pevakuru vake mukoma-munin'ina Trace naBrandi (kubva kumuchato waamai vake vekare).
Makore gare gare akagamuchira kuwedzerwa kwevanun'una vatatu: Christopher (hafu-mukoma kubva kuna baba vake), Braison naNowa.
Akatumidzwa zita rekuti "Smiley" iro rakazopfupikiswa kuita "Miley" mu2008, muimbi wekuimba aive mwana anofara achinyemwerera uyo aive akakomberedzwa nemafambiro muindasitiri yevaraidzo iyo vabereki vake naMwarikadzi, Dolly Parton vaibatikana kwazvo.
Miley paakanga akura 8, mhuri yaKoresi yakatamira kuToronto kunogonesa Billy (baba vaMiley) firimu vhidhiyo yeterevhizheni "Doc" semunhu anotungamira. Yaive muToronto apo Miley akaperekedza baba vake kuimba yemitambo kwavakatarisa mimhanzi "Mamma Mia".
Mimhanzi yakagadzirisa zvakadai kuna Miley uyo akabata tsvimbo yababa vake mushure mekuratidzwa kwekurati:
"Ndizvo zvandinoda, baba! Ndinoda kuva muchengeti wekambani! ".
Vabereki vake, saka, vakanyoresa kuAarmstrong Acting Studio apo akatanga kutora zvidzidzo zvekuimba uye kuimba apo pavakawana dzidzo inowanikwa.
Miley Cyrus Dzidzo:
Nhoroondo yeMiley yekudzidza inosanganisira dzidzo yake kuHeritage Elementary School.
Paaidzidza pachikoro ichi Miley akawana gigi rake rekutanga rekuita nekuita madiki madiki mu "Doc" padivi pababa vake vaive mutambi mukuru.
50 Cent Childhood Indaba Nezve Untold Biography Facts
Iye akazoonekwa mune yekufungidzira adventure firimu 'Hove Huru' izvo zvakamutora nhanho padhuze nembiri.
Tichipiwa chinzvimbo chake chemukurumbira, mudiki Miley aisakwanisa kutsika muchikoro chechokwadi kana chetsika.
Iye pachinzvimbo, akazviisa pachinzvimbo cheYesarudzo yeYouth Charter Zvikoro (izvo zvakamupa iye wega mudzidzisi) mushure mekuwana chinzvimbo muDisney Channel terevhizheni 'Hannah Montana' (2006).
Miley Cyrus Biography - Simuka Mukurumbira:
Hannah Montana akazove akarova nhevedzano yakatanga basa raMiley muindasitiri yevaraidzo.
Akatasva mukurumbira wake kubva mufirimu, Miley akatsvaga kuita foray muindasitiri yemimhanzi nekuburitswa kwenyaya yake uye kwete rakanyanya kubudirira album, 'Hannah Montana 2: Sangana naMiley Cyrus'.
2008 ndiyo gore raakagadzira musoro nekubudiswa kwebhuku rayo re studio, 'Breakout'. Iyo album yakatanga pane imwe nhamba yepamusoro paBillboard 200 yekugadza Miley chimiro semuimbi uye munyori wenziyo.
Miley Cyrus Hukama Hupenyu Hupenyu:
Miley Cyrus ndiye mukadzi akaroora. Tinokuudzai nezvehukama hwake hwakapfuura kusanganisira kuti akasangana sei ndokuroora murume wake Liam Hemsworth.
Chokutanga chaiva ukama hwake hwepfupi naNick Jonas weboka remimhanzi "Jonas Brothers" mu2007.
Kupfurikidza nehukama hwepamberi hwemhuri hwakatsika nenzira imwechete pfupi sezvaaiita pakutanga. Dzinosanganisira rudo rwake rwekuda naPatrick Schwarzenegger, mwanakomana wezvinyorwa zvemutambo Arnold Schwarzenegger muna 2015.
Aivawo neBIS3xual nyaya ne Victoria's Secrets model Stella Maxwell.
Miley Cyrus Kuroora naLiam Hemsworth:
Miley Koreshi akasangana nomurume wake kuti ave, Liam Hemsworth paunenge uchitora "Rwiyo Rwekupedzisira".
Vakatanga kufambidzana mushure naLiam achionekwa mune imwe yemavhidhiyo ake emimhanzi akanzi 'Kana Ndichikutarisa'.
Shiri dzerudo dzakabatanidzwa muna may 2012 chete kuzoputsa gore rinotevera mushure mekunyadzisa kwaMiley paMTV Video Music Awards-2013 (Miley akaita chibvu-tease ndokuita chiito chinonyadzisa nemuimbi, Robin Thicke).
2015 raive gore iro Liam akamutsidzira marimi ekare erudo naMiley Cyrus, kusangana zvakare kwakasimba nekuvandudzwa kwewanano kuchizoguma nemuchato wepachivande pane 23rd yaDecember 2018.
Vakaroorana vaingozivikanwa chete kuti vakasungiridza zvakasungirirwa ruzivo apo zvifananidzo zvakaonekwa kuratidzira zvipfeko zvavo zvakabuda pa Instagram.
Charlie Puth Mwana Wechidiki Nhau Plus Untold Biography Facts
Miley Cyrus Hupenyu Hwemhuri:
Miley akaberekerwa mumhuri ye8. Tinokuudza mashoko echokwadi nezvemhuri yemhuri yake.
Nezvebaba vaMily: William "Billy" Ray Cyrus ndiye baba vemuimbi. Akazvarwa musi we 25th waAugust 1961 paPloughwoods muKentucky USA.
Muimbi ane mhembere ane maitiro mashomanana ezere terevhizheni akaziva kare kare kuti Miley aizoita nzvimbo dzakakwirira, saka akamutumidza zita rinonzi Destiny uye akaramba achimutsigira zvikuru.
Pamusoro paMily's Amai: Leticia Jean "Tish" Cyrus ndiye amai venyeredzi yepop. Iye akazvarwa pa13th yaMay 1967 uye akaroora murume wake Billy pa28th yaDecember 28, 1993.
Aive pamberi pemubatanidzwa akaroorwa newaimbova murume wake, Baxter Neal Helson uyo waaive nevana naye.
Kunyange zvazvo dzimwe nhengo dzomumhuri dzakawanda dzichiita mimhanzi, Tish yakavezwa niche yega mumabhaisikopo anoonekwa pakati payo ari Undercover (2012), LOL (2012) uye firimu yakakurumbira-inobudiswa - The Last Song (2010).
NezveMily's Siblings: Miley ane 5 vanin'ina vaanosanganisira;
Brandi Glenn Cyrus ndiye hanzvadzi yaMily uye hanzvadzi yehanzvadzi yakaberekerwa naTish. Haasi kushamisika kunobatanidzwa mukuita saizvozvowo.
Zvadaro ndeye Trace Dempsey Koreshi. Iye ndiMiley's-mukoma-mukoma uyo zvakare akazvarwa naTish akamboroora. Trace muimbi, munyori wenziyo uye gitare uyo ane torso yake yakafukidzwa neTattoo.
Christopher Cody Koreshi ndiye oga hama yakaberekerwa nababa vaMiley mushure mekare nekasikana wake Kristin Luckey. Akakurira naamai vake kuSouth Carolina, saka akazviparadzanisa nevamwe vehama dzake dzose.
Braison Chance Kuro ndiye mwana wechipiri akaberekerwa kubatana pakati paBilly naTish. Akanga aine mukana wake wekuita muzvinabhizimusi zvekuvaraidza nekubatana nehanzvadzi yake muHannah Montana. Braison ikozvino inoshanda semuenzaniso uye iye akasaina naWilhelmina Models.
Pakupedzisira asi kwete kwete zvishoma Noa Lindsey Koreshi, mwana wechitatu akaberekerwa kubatana pakati paBilly naTish. Noa anonyanya kufanana naMirey uye anotevera tsoka dzake nekuvaka basa mumimhanzi.
Miley Cyrus Chokwadi:
Ne $ 1 Billion inopfuura hits, Miley zvakare akatsvaga kupfuura Lady Gaga, Katy Perry, Kim Kardashian, uye kunyange mutungamiri wekare Barack Obama.
Iye haadi kuda kuteerera chero ipi zvayo mairi albamu dzakare. Zvaanoita mushure mekunyora kwose kunotanga kutarisa uye kukanganwa nezvazvo.
Munguva ye2014 VMAs, Koreshi akaunza murume asina pokugara anonzi Jesse sezuva rake, achimubvumira kushandisa nguva yakagamuchirwa kutaura kwake kuzokurukura matambudziko ekusava nemusha.
Khalid Robinson Childhood Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Miley Cyrus Hupenyu hweMunhu:
Miley yakashanduka kubva mumakore uye ndizvo zvakaita unhu hwake. Akatanga kubva pakuva akanaka, asina hanya naHannah Montana munhu kutonga breaker ane bvudzi rakasiyana, asina zvishoma pane zvinyorwa zve 10 uye kuzarura zvipfeko. Izvi zvinoenda kuratidza kuti chimiro chake chinosimba, kwete chechi.
Akasimudzwa semuKristu uye akabhabhatidzwa muchechi yeSouthern Baptist, Miley anonamata uye akambodzivirira zvaaitenda nekusimbisa izvo “Sayenzi isina chitendero inokamhina.
Chitendero chisina sainzi ibofu ”. Anotsigira kodzero dze LGBT uye ane rwendo rurefu rwekuita zvakanaka. Zvimwe zvinofadza zvinosanganisira kufamba uye kutasva mabhasikoro.
Bruno Mars Yevacheche Nyaya uye Untold Biography Chokwadi
Miley Cyrus Mararamiro:
Miley ane imba yakaisvonaka uye inonakidza inokwana $ 3.9 mamiriyoni mu Studio Studio yeCalifornia.
Iye aratidzirawo kuva anoda mota neakawanda maunganidzwa ayo anosanganisira McLaren MP4 12C, Maserati Quattroporte, mota yemhando yepamusoro yeSUV - Porsche Cayenne, Mercedes-Benz ML 450 Hybrid, Range Rover Sport, Infiniti G35 uye 2012 SL550 Inoshandurwa.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Liam Hemsworth Childhood Story pamwe chete biography nhoroondo. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!
Camila Cabello Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Rihanna Childhood Story Plus Untold Biography Facts